यी चीज फ्रिजमा नराखौं | ''Knowledge Never Ends''
यी चीज फ्रिजमा नराखौं
गर्मी मौसममा फ्रिजमा राखिएको खानेकुरा खाँदा शीतल अनुभव हुन्छ । खानेकुरा बिग्रनबाट जोगाउन पनि बढी भएको खाना फ्रिजमा राखिन्छ । हामीले थाहा नपाई कतिपय कुरा फ्रिजमा राखिरहेका हुन्छौं । निम्न चीजलाई फ्रिजमा राख्नुहुँदैन :
गोलभेंडा : पाकेको गोलभेंडामा भिटामिन ए, सी, के, फोलेट तथा पोटासियम हुन्छ । फ्रिजमा गोलभेंडा राख्दा त्यसको स्वादमा मात्र परिवर्तन आउने होइन त्यसमा समावेश भएको लाइकोपिन भन्ने तत्व पनि घट्छ । यसले गर्दा गोलभेंडाको फाइदा कम हुन्छ । फ्रिजमा गोलभेंडा राख्नुपरे कागजमा बेरेर मात्र राख्नुपर्छ ।
ब्रेड : सामान्यतया ब्रेडले शरीरलाई पोषण तत्व प्रदान गर्दैन । यसले फाइबर पनि प्रदान गर्दैन । ब्राउन ब्रेडमा भने केही मात्रामा पोषक तत्व हुन्छ । ब्रेड फ्रिजमा राख्दा त्यसमा अलिअलि भएको पोषक तत्व पनि नाश हुन्छ । ब्रेड फ्रिजमा राख्दा सुक्छ । चार दिन पुरानो ब्रेडलाई मात्र फ्रिजमा राख्नुपर्छ ।
प्याज : प्याजमा प्रोटिन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेड, क्याल्सियम, फस्फोरस, भिटामिन, क्यालोरी आदि सबै पाइन्छ । आयुर्वेदका अनुसार प्याजको सेवनले छालामा चमक ल्याउँछ । यसले पाचन शक्ति बढाउँछ । छालाको सबै रोग नष्ट हुन्छ । उच्च रक्तचापका बिरामीका लागि यो वरदान नै हो । फ्रिजमा प्याज राख्दा फ्रिजमा भएका अन्य खानेकुराबाट पनि प्याजजस्तै वासना आउँछ । प्याजलाई सधैं अन्य तरकारीबाट अलग राख्नुपर्छ ।
आलु : आलुको उत्पादन सबैभन्दा पहिले पेरुमा भएको थियो । आलुको उत्पादन चीन, रुसपछि भारतमा सबैभन्दा बढी हुन्छ । जुनसुकै तरकारीसँग मिल्ने आलुबाट प्रशस्त मात्रामा पोषक तत्व प्राप्त हुन्छ । उमालेको तथा हल्का फ्राई गरिएको आलु खाँदा शरीरमा शक्ति प्राप्त हुन्छ । आलुलाई फ्रिजमा राख्दा त्यसमा भएको स्टार्च सुगरमा परिवर्तन हुन्छ । यस्तो आलु खाँदा फाइदा होइन बेफाइदा मात्र गर्छ । आलुलाई फ्रिजमा नराखी नहुने भए कागजको झोलामा हालेर मात्र राख्नुपर्छ ।
मह : महको उपयोग आँखाका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसले रगत सफा राख्छ र मुटुलाई बलियो बनाउँछ । जाडो मौसममा कफ (खोकी) तथा घाँटी खराब हुँदा पनि महको सेवन फाइदाजनक सिद्ध हुन्छ । यसको सेवनले निद्रा पनि लाग्छ । महलाई फ्रिजमा राख्दा त्यसको पोषक तत्व नाश हुन्छ । टाइट डिब्बामा लामो समयसम्म बाहिर राख्दा पनि मह खराब हुँदैन ।
स्याउ : स्याउमा पर्याप्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ । स्याउ खाँदा पाचन प्रक्रिया पनि ठीक रहन्छ । यसमा भएको एन्टिअक्सिडेन्टले मधुमेह, क्यान्सर तथा दिमागसँग सम्बन्धित बिरामीबाट जोगाउँछ । स्याउले शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा सामान्य बनाउँछ । यसले मधुमेहका बिरामीलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । स्याउलाई फ्रिजमा राख्नुहुँदैन । फ्रिजमा राख्दा त्यसमा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट नष्ट भएर जान्छ ।
तरबुजा : तरबुजामा लाइकोपिन पाइन्छ । लाइकोपिनले छाला मुलायम बनाउँछ । यसको नियमित सेवन गर्दा क्यान्सर हुँदैन । तरबुजाले मुटुको बिरामीबाट जोगाउँछ । यसले शरीरलाई रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्छ भने मोटोपन पनि कम गर्छ । मानसिक बिरामी तथा कामका कारण तनावमा रहने मानिसले तरबुजा खाँदा फाइदा पुग्छ । दिमाग शान्त तथा खुसी रहन्छ । धेरै रिस उठ्ने मानिसले तरबुजा खाँदा रिस कम हुन्छ । गर्मी मौसममा तरबुजा खाँदा धेरै बिरामीबाट जोगिन सकिन्छ । तरबुजालाई काटेको छैन भने फ्रिजमा नराख्नु नै वेश हुन्छ । काटिएको तरबुजालाई तीन दिनसम्म फ्रिजमा राख्न सकिन्छ ।
← थाहा छ ? यी ८ रोगको उपचार गर्न पैसा नहुनेहरुलाई सरकारले सहायता गर्छ नि !
Know in 1 minute who is observing your Facebook →